Ny atrikasa fanadiovana vovoka legioma tsy ampy rano an'ny zavamaniry Ruisheng dia nohavaozina ary napetraka
Ny vovoka legioma dia ny legioma amin'ny tsy fahampian-drano maina voalohany, ary avy eo nopotsehina, ny vovoka legioma dia ny fanitarana ireo vokatra legioma tsy ampy rano. Nanomboka nanatsara ny atrikasa vovoka legioma tsy ampy rano tamin'ny faran'ny taona 2020 ny orinasanay, ary nohavaozina vao haingana ary napetraka tamin'ny famokarana. Ny f ...Hamaky bebe kokoa »
Fampirantiana momba ny sakafo sy zava-pisotro iraisam-pirenena SIAL China 2021 dia natao araka ny voatondro
Iray amin'ireo foara ara-tsakafo telo lehibe indrindra eran-tany, ny Fihaonambe miady amin'ny indostrian'ny sakafo manerantany, SIAL China International Food and Beverage Exhibition, natao tamin'ny 18 Mey tao amin'ny Pudong International Convention and Exhibition Center any Shanghai, Sina. Fampirantiana zava-pisotro misy alikaola, vokatra vita amin'ny ronono, snac ...Hamaky bebe kokoa »
Tamin'ny volana aprily, ny 2021 tsena dia misy asidra citrika, siligaoma xanthan
Fotoana fandefasana: Mey-05-2021
Nanomboka tamin'ny 2021 dia nisondrotra ny vidin'ny asidra citrika any Chine, miaraka amin'ny fiakarana isan-taona amin'ny taona 60,81% raha oharina amin'ny taona 2020. 54,55% izany fiakarana isan-taona izany raha ampitahaina amin'ny taona 2019. 20 aprily 2021. ny asidra citrika any Sina dia nanomboka nilamina, saingy tsy nitohy niakatra ny vidiny. Ny tany ambony ...Hamaky bebe kokoa »
Ny paty fitaratra mafana sy marikivy dia manana ho avy mamiratra eo amin'ny tsena manerantany
Hatramin'ny faran'ny taona 2020, dia namidy tao amin'ny tsenan'i Malezia ny kaontenera voalohany misy ny paty misy veromanitra mafana sy marikivy aondrana any Malezia. Ny kalitaon'ny tsirony dia nahazo ny fankasitrahana sy fankasitrahan'ny mpanjifa. Natoky ny mpanjifa amina fikambanana matihanina ny biby ...Hamaky bebe kokoa »
Namboarina soa aman-tsara ny paty veromanitra mafana sy marikivy nanondrana any Malezia
Taorian'ny fikarohana sy fampandrosoana ary fanandramana efa ho roa volana, ny 18 novambra 2020, Jiaxing Ruisheng International Trade Co., Ltd. ary ilay orinasa any ambanivohitra Anhui Three Brothers Potato Industry Co., Ltd. dia niara-namorona ny paty veromanitra mafana sy marikivy ho an'ny fanondranana any Malezia. Ity produ ...Hamaky bebe kokoa »
Prospect ho avy ny paty paty Instant
Eo ambanin'ny fitaoman'ny indostrian'ny sakafo rehetra, ny paty ovy mamy dia malaza amin'ny mpanjifa amin'ny sokajin-taona rehetra noho ny fahalemeny, ny tsiro samihafa ary ny sandan'ny sakafo mahavelona. Mora, haingana ary manankarena amin'ny fibres sakafo, vitamina ary sakafo hafa. Asehon'ny valiny fa ny ...Hamaky bebe kokoa »
Famotopotorana sy famakafakana ny indostrian'ny legioma tsy ampy rano sinoa ary faminavinana ny tatitra momba ny fitsinjovana ny tsena (2018-2025)
Legioma tsy ampy rano, fantatra ihany koa amin'ny hoe legioma manala rano, dia legioma vaovao aorian'ny fanasana, fanamainana sy fanodinana ary famokarana hafa, manala ny ankamaroan'ny rano amin'ny legioma ary vita amin'ny legioma maina. ...Hamaky bebe kokoa »
L - Phenylalanine (PHE), Zinc asidra lakika, L - Glutamine, Lettuce tsy ampy rano, Taurine, Paty,